Cubot P40 dia ho tonga amin'ny 18 Mey miaraka amin'ny fakan-tsarimihetsika Budget King quad | Androidsis
Ho tonga amin'ny 40 Mey i Cubot P18 miaraka amin'ny fakantsary fampiasa amin'ny Budget King quad
Ireo fitaovana finday mandritra ny taona maro dia mandroso amin'ny lafiny teknolojia. Orinasa maro no manolo-tena amin'ny R&D hahafahany manolotra ny farany amin'ny findainy, zava-dehibe raha te hanolotra fantsona misy endri-javatra manan-danja amin'ny vidiny novaina ianao.
Hoy Cubot dia nanambara ny datin'ny fampisehoana ny sainan'ny orinasa manaraka, Cubot P40. Ho tonga ny telefaona amin'ny 18 Mey miaraka amin'ny sensor efatra hatramin'ny any aoriana miaraka amin'ny anaran'ny Quad-fakantsary Budget King ary ny fahombiazany dia ho miavaka tokoa raha ny fakana sary sy ny fanaovana horonantsary avo lenta.
1 Izay rehetra omen'ny Cubot P40 vaovao ho anay
2 Fakan-tsary miendrika L miaraka amin'ny sensor an'ny Sony IMX486 AI Quad Camera
3 Android 10 ho toy ny rafitra miasa
4 Vata 10 ho an'ny tarehy ho an'ireo izay maminavina ny vidin'ny varotra manerantany izay hamidy ny Cubot P40 amin'ny 18 Mey ho avy
Izay rehetra omen'ny Cubot P40 vaovao ho anay
Ny Cubot P40 vaovao dia nanambara ny toetrany rehetra, ao anatin'izany Misongadina ny efijery 6,2-inch miaraka amin'ny teknolojia LTPS, dia teknolojia fisaka fisaka ho an'ny fampisehoana avo lenta ary manolotra fanjifana herinaratra ambany. Amin'ity tranga ity dia hanompo izy mba hahafahan'ny efijery manao tsara amin'ny alàlan'ny fanjifana faran'izay kely ny herin'ny bateria.
Ity finday ity koa dia manana bateria lehibe ampy hanome aina ny P40 mandritra ny 24 ora mahery, 4.200 mAh ny bateria ampiana. Ny iray amin'ireo teboka tsara dia ny nanamafisan'ny orinasa fa ny bateria azo esorina, ka azo soloina amin'ny fotoana hafa amin'ny hafa amin'ny ho avy.
Cubot P40 dia manana fikirakira RAM 4 GB sy fitehirizana dia 128 GB, mihoatra ny ampy hahafahana mitahiry sary, antontan-taratasy ary horonan-tsary marobe. Araka ny filazan'ny Cubot Facebook, ity maodely ity no ho smartphone finday mora indrindra, noho izany dia finday avo lenta kaliberôna.
Fakan-tsary miendrika L miaraka amin'ny sensor an'ny Sony IMX486 AI Quad Camera
Nanapa-kevitra ny mpanamboatra aziatika fa miloka amin'ny fakan-tsary fakantsary quadruple ao aoriana, zava-dehibe ny lantiro hahazoana ny fahombiazana tsara indrindra raha te haka sary amin'ny fotoana sy ny tontolo iainana ianao. Ny fakan-tsary any aoriana dia sensor 12 MP avy amin'i Sony manampy amin'ny solomaso telo.
El Smartphone smartphone Cubot P40 Eo aloha dia nisafidy sensor 20 megapixel avy any Samsung izy, mety indrindra amin'ny sary tsara indrindra misy sary, horonan-tsary ary fihaonambe an-tsary. Ny fitambaran'ny solomaso Sony sy Samsung dia mampamirapiratra azy amin'ny kalitaon'ny sary farany.
Azo jerena fa ny fakan-tsary dia tonga amin'ny endrika L mba hanararaotana ny habaka sy hakana sary tsara indrindra, samy manana ny lehibe sy ireo manohana ny solomaso Sony. Eo amin'ny ilany ankavanana dia mampiseho Flash LED izay hanohanana antsika amin'ny toe-javatra izay ilantsika hazavana ary hampamirapiratra ny seho tsirairay voatahiry ao amin'ny fitoerantsika.
Android 10 ho toy ny rafitra miasa
Ny telefaona Cubot P40 dia ho avy miaraka amin'ny kinova Android farany eo alohany, ilay voafidy dia Android 10 amin'ny fomba madio ary tsy misy fampiharana an'ny antoko fahatelo efa napetraka. Ilaina izany raha te hanana fampisehoana tsara indrindra amin'ny finday avo lenta ianao ary maro ireo manapa-kevitra hanao izany mba hisafidianan'ilay mpampiasa ny rindranasa hapetraka ary iza no tsy.
Miaraka amin'ny Android 10 dia misy fidirana tsara kokoa satria mampihatra ny asany toy ny Live Caption, Live Transcribe, fanamafisam-peo, fanatsarana ny fizarana sary, fomba fifantohana (rafitra hanakanana vonjimaika ny fampiharana) ary ny maody maizina efa fantatra (Maody maizina) efa malaza, miaraka amin'ireo fiasa maro hafa.
Cubot amin'ny alàlan'ny pejy ofisialiny dia manolotra fanohanana fanavaozana ny telefaona rehetra misy amin'ny katalaogna be dia be ananany. Mamela hery misintona kinova miovaova amin'ny fitaovana hafaZava-dehibe noho izany ny fahaizanao mitazona hatrany ny vanim-potoana farany.
Vata 10 ho an'ny tarehy ho an'ireo izay maminavina ny vidin'ny varotra manerantany izay hamidy ny Cubot P40 amin'ny 18 Mey ho avy
Cubot dia hanolotra singa 10 amin'ny fanomezana lehibe ho an'ireo mpandresy mba hitsapana ny fitaovana ary hanolotra fanatsarana. Mba ho isan'ireo mpandresy dia mila maminavina fotsiny ianao ny vidin'ny varotra manerantany amin'ny telefaona. Raha liana amin'ny telefaona ianao dia azonao ampiana amin'ny sarety amin'ny AliExpress ary ampandrenesina rehefa manomboka ny varotra.
Ankoatr'izay, toa ny antsapaka dia tanterahina amin'ny alàlan'ny sehatra Gleam.io, azonao atao ny manampy teboka maro kokoa izay afaka handika zavatra betsaka kokoa amin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra toy ny fanarahana Cubot ao amin'ny YouTube, Instagram, Facebook ary Twitter.
?? Mandraisa anjara amin'ny raffle amin'ny fipihana eto ??
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ho tonga amin'ny 40 Mey i Cubot P18 miaraka amin'ny fakantsary fampiasa amin'ny Budget King quad
Mifaninana amin'ny fotoana tena mifaninana amin'ireo mpilalao golf amin'ny Swing Perfect
Ahoana ny fomba fampikambana ireo rakitra marobe ao anaty PDF tokana